ခုလိုမသေသင့်ဖဲ သေခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပီလဲ - San Thitsa
အလိုလိုနေရင်း ဘာမှမသုံးဘဲ ဖုန်းဘေလ်ကုန်နေရင် ဒါတွေစစ်ကြည့်ပါ…
၅၀၀ ကျပ်တန် ထမင်းဆိုင်၊ ရေတက်ငါးစင်ရိုင်းနဲ့ လှူတော့လှူတယ် လွဲနေတဲ့ ရွှေမြန်မာများ
ခြတောင်ပို့မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပြီး လူတွေ အမျိုးမျိုးခေါ်နေကြတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းပစ္စည်းလေးတွေ. . .
ကြက်တစ်ကောင်လုံးကို ဈေးပေါပေါရတယ်ဆိုပြီးဝယ်ခဲ့ရာ အိမ်ရောက်၍ ခုတ်ကြည့်ရာမှ ကြေကွဲသွားရသည့်အဖြစ်
ခုလိုမသေသင့်ဖဲ သေခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပီလဲ
ခုလိုမသေသင့်ဖဲ သေခဲ့ရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ ဘယ်လောက်တောင်ရှိနေပီလဲ😢😢😢
(၂၇.၆.၂၀၂၀)ရက်နေ့ မနက်က နေပြည်တော်ပုဗ္ဗသီရိကုတင်(၃၀၀)ပြည်သူ့ဆေးရုံရဲ့ရင်ခွဲရုံမှာ အသက်ရှိနေတဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်ကိုသေပြီထင်ပြီးကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ထည့်ရင်ခွဲရုံပို့ထားတာကိုသဗ္ဗသုခနာရေးအသင်းကလူသေအလောင်းရင်ခွဲရုံပို့ရင်းကြမ်းပြင်ပေါ်ချထားတဲ့ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ကလှုပ်နေပြီးအသံကြားရလို့ဖွင့်ကြည့်တော့မှကလေးဖြစ်နေလို့ရင်ခွဲရုံစောင့်ကိုပြတော့မှဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတွေလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
သဗ္ဗသုခဥက္ကဌကတော့ ဒီဖြစ်စဉ်ဟာဆရာဝန်တွေပေါ့လျော့မှုဖြစ်တာမို့ ဆေးရုံအုပ်ကိုတွေ့ဆုံဖို့ခွင့်တောင်းပေမယ့်မတွေ့တဲ့အတွက်MOHSပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥက္ကဌတွေဆီ July 3ရက်နေ့က စာပို့တင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။
(၅)နာရီကြာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲမှာ နေခဲ့ရတဲ့မွေးကင်းစကလေးငယ်ဟာ (၄)ရက် အသက်ရှင်ခဲ့ပြီး ၃၀.၆.၂၀၂၀ မနက်မှာသေဆုံးခဲ့ပါပြီ။လူ့အသက်ကို ပေါ့ဆစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေကို ဆမ သိမ်း မသိမ်းစောင့်ကြည့်ပါမယ်။ဒီလိုဆရာဝန်တွေလက်ထဲ ဆမလက်မှတ်ထည့်ဖို့ မထိုက်တန်ပါဘူး။
သဗ္ဗသုခနာရေးအသင်းရဲ့ဖော်ထုတ်မှုကိုလေးစားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး နာရေးအသင်းက သားဖွားမီးယပ်ဆောင်တာဝန်ခံအထူးကုဆရာဝန်မကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ ၅မိနစ်စာဗွီဒီယိုဖိုင်ပါရခဲ့လို့ဖြစ်စဉ်မှန်ကြောင်း တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ uptadeလုပ်ပေးပါမယ့်ခင်ဗျာ။ ခရက်ဒစ်
ခုလိုမသသေငျ့ဖဲ သခေဲ့ရတဲ့ ကလေးငယျတှေ ဘယျလောကျတောငျရှိနပေီလဲ😢😢😢
(၂၇.၆.၂၀၂၀)ရကျနေ့ မနကျက နပွေညျတျောပုဗ်ဗသီရိကုတငျ(၃၀၀)ပွညျသူ့ဆေးရုံရဲ့ရငျခှဲရုံမှာ အသကျရှိနတေဲ့မှေးကငျးစကလေးငယျကိုသပွေီထငျပွီးကွှပျကွှပျအိတျနဲ့ထညျ့ရငျခှဲရုံပို့ထားတာကိုသဗ်ဗသုခနာရေးအသငျးကလူသအေလောငျးရငျခှဲရုံပို့ရငျးကွမျးပွငျပျေါခထြားတဲ့ကွှပျကွှပျအိတျကလှုပျနပွေီးအသံကွားရလို့ဖှငျ့ကွညျ့တော့မှကလေးဖွဈနလေို့ရငျခှဲရုံစောငျ့ကိုပွတော့မှဆေးရုံတာဝနျရှိသူတှလေကျကိုအပျလိုကျတယျလို့သိရပါတယျ။
သဗ်ဗသုခဥက်ကဌကတော့ ဒီဖွဈစဉျဟာဆရာဝနျတှပေေါ့လြော့မှုဖွဈတာမို့ ဆေးရုံအုပျကိုတှဆေုံ့ဖို့ခှငျ့တောငျးပမေယျ့မတှတေဲ့အတှကျMOHSပွညျထောငျစုဝနျကွီး၊ နပွေညျတျောကောငျစီဥက်ကဌ၊ မွနျမာနိုငျငံဆေးကောငျစီဥက်ကဌတှဆေီ July 3ရကျနကေ့ စာပို့တငျပွထားတယျလို့သိရပါတယျ။
(၅)နာရီကွာ ကွှပျကွှပျအိတျထဲမှာ နခေဲ့ရတဲ့မှေးကငျးစကလေးငယျဟာ (၄)ရကျ အသကျရှငျခဲ့ပွီး ၃၀.၆.၂၀၂၀ မနကျမှာသဆေုံးခဲ့ပါပွီ။လူ့အသကျကို ပေါ့ဆစှာဆောငျရှကျခဲ့သူတှကေို ဆမ သိမျး မသိမျးစောငျ့ကွညျ့ပါမယျ။ဒီလိုဆရာဝနျတှလေကျထဲ ဆမလကျမှတျထညျ့ဖို့ မထိုကျတနျပါဘူး။
သဗ်ဗသုခနာရေးအသငျးရဲ့ဖျောထုတျမှုကိုလေးစားပါတယျ။ဖွဈစဉျနဲ့ပကျသကျပွီး နာရေးအသငျးက သားဖှားမီးယပျဆောငျတာဝနျခံအထူးကုဆရာဝနျမကိုတှဆေုံ့မေးမွနျးထားတဲ့ ၅မိနဈစာဗှီဒီယိုဖိုငျပါရခဲ့လို့ဖွဈစဉျမှနျကွောငျး တငျပေးလိုကျပါတယျ။ uptadeလုပျပေးပါမယျ့ခငျဗြာ။ ခရကျဒဈ
Post Views: 1,330
← ချစ်တဲ့သူကို သတိရတဲ့အခါ မေတ္တာပို့ ပေးပါ ..
ခြံ၊ မြေ၊ အိမ်၊ ရောင်းထွက်ရန် ဓာတ်ရိုက် ဓာတ်ဆင်နည်း →
မွေးရပ်မြေ ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလှူဒါန်းဖို့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်းတိုက်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နေတိုး
စပွန်ဆာရှိလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုစပွန်ဆာတွေအများကြီး ရှိပါတယ်ဆိုပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေကြားလာတဲ့အလှမယ်သင်းသင်း
ကလေးက ဗိုက်အရမ်းနာလို့ ခွဲစိတ်လိုက်တဲ့အခါ ဆရာဝန်ကိုယ်တိုင်က အံ့သြခဲ့ရတဲ့ သတိထားစရာ အဖြစ်အပျက်
Copyright © 2022 San Thitsa. All rights reserved.